theZOMI: [mrsorcerer:38062] Doing Business In Myanmar
[mrsorcerer:38062] Doing Business In Myanmar
မြန်မာပြည်တွင် ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းလိုင်စင် (ပါမစ်)များ ချပေးပြီး လုပ်ကြသည်က များသည်။ ကုမ္ပဏီမထောင်လိုကြ။ ပါစင်နယ် (လူပုဂ္ဂိုလ်)အားဖြင့်သာ လုပ်ကြသဖြင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများက လာရောက်လေ့လာပြီးပြန်သွားကြသည်သာ များသည်။ NATO ခေတ်စားနေသည်။ No Action Talk Only... I also same same.
မြန်မာအီးဂရပ်စ်မှာ သင်တန်းတက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ ယခု အသက်၂၇နှစ်ရှိပါပြီ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ စီးပွားရေးဘောဂဗေဒ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ ဂျာနယ်လစ်စင် စတဲ့ အဆင့်မြင့်တွေးခေါ် ပြောဆို၊ ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ခဲ့တာကြောင့် မိမိသူငယ်ချင်းများရဲ့ ရိုးရာလုပ်ငန်း စစ်ဗိုလ်၊ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘဏ်၊ အင်ဂျီအို စတဲ့လုပ်ငန်းများကို မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ အခုတော့ တစ်ခုကိုလုပ်မယ် ဆုံးဖြတ်ပြီး ကံအားလျှော်စွာ ဂျပန်မှာ အနှစ်၂၀ကျော် နေလာခဲ့တဲ့ အန်တီတစ်ဦးနဲ့ တွေ့မိသွားပါတယ်။ ဂျပန်စကားပြောသင်တန်းကနေ သင့်တော်သူများကို ဂျပန်တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းများသို့ ပို့ဆောင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကုမ္ပဏီစတင်ထောင်ပါတယ်။ တကယ်လုပ်ကိုင်ကြည့်တဲ့အခါ ဌာနဆိုင်ရာများက အဆင်ပြေလွယ်ကူပါတယ်။ မီးသတ်၊ ရဲစခန်း၊ လျှပ်စစ် စတဲ့ဌာနများက ထောက်ခံစာများ လက်ဆောင်ပေးစရာမလိုပဲ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ပညာရေးဌာနမှာ ၃ခေါက်လောက်သွားခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံး မြို့နယ်ပညာရေးရုံးက၊ စာရေးကြီးအဆင့်ရှိသူ .. ကျပ်တစ်သိန်းလောက် လိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာလို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ နည်းလမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။ ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ နီးစပ်သူများ အကြံပေးတာတော့ ... ကျောင်းဖွင့်တာမဟုတ်၊ လူ၃၀လောက်အတွက် သင်တန်းဖွင့်ချင်လို့ ပြောပါ။ ပညာရေးမှုးအဆင့်ထိ သွားတွေ့စရာမလိုကြောင်း စသဖြင့် အကြံပေးကြပါတယ်။
ဗဟိုအစိုးရကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အမြက်အစွန်းအလွန်ရတဲ့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ သယံဇာတရောင်းချရေးလုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ကုန်ပြည်ပပို့ခြင်း၊ လျှပ်စစ်စက်မှု၊ဓါတုကုန်တင်သွင်းခြင်း၊ ဒီဇယ်ဓါတ်ဆီတင်သွင်းခြင်း၊ ယာဉ်အမျိုးမျိုးတင်သွင်းခြင်း၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး အထူးသဖြင့် သံ၊ သံမဏိများတင်သွင်းဖြင်း၊ စတဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များ လုံးဝသိစရာမလိုတဲ့ သံယံဇာတ တင်သွင်းခြင်း၊ ထုတ်ရောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ.. မြိတ်ကျွန်စု ၈၀၀၀ကျော်မှာ အလွန်ကြီးမားလှတဲ့ ပုလဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို ဂျပန်ကုမ္ပဏီများစွာ၊ သြစတြေးလျားကုမ္ပဏီအချို့လာရောက်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ထွက်တဲ့ပုလဲအရေအတွက်ရဲ့ ၂၅%ကို မြန်မာအစိုးရကို ပေးရတဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ့ပုလဲဌာနက မွေးမြူတဲ့ ကမာကောင်အရေအတွက်ကို သေချာစာရင်းစစ်၊ ရေတွက်ပါတယ်။ ဂျပန်နည်းပညာအဆင့်မြင့်လွန်းလို့ ဒေသခံများ လုပ်ကိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ရေအောက်ချထားတဲ့ ကမာကောင်များရဲ့ ကျန်းမာရေးကို လစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ကမာကောင်များကို တစ်ကောင်ခြင်း သူတို့ထဲက ပုလဲများအခြေအနေကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ခြင်း၊ ၅နှစ်ကြာတဲ့အချိန် ထုတ်ရောင်းခြင်း၊ ယခုအခါ ကမာကောင်ရဲ့ အခွံကလည်း ဈေးအရမ်းကောင်းလာတဲ့အတွက် ကန်ထရိုက်များကို ပြန်လည်ပြောင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေခြင်း၊ သိန်းဂဏန်းရှိတဲ့ ပုလဲမွေးလုပ်ငန်း အလုပ်သများများကို ဂျပန်များက စနစ်တကျ၊ စားဝတ်နေရေးစီမံပေးခြင်း၊ သြစတြေးလျားများက မရိုးသားခြင်း၊ ပုလဲများကို ဖွက်ပြီးခိုးထုတ်မှု သြစတြေးလျှားများ အလွန်လုပ်သော်လည်း ဂျပန်များက ဒါမျိုးတွေ မလုပ်ကြကြောင်း ... လူအများသိတဲ့ လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်း စာချုပ်ကို တရုပ်နဲ့ တဖက်သတ်ချုပ်ဆိုခဲ့မှုရှိသလို .. တခြားစီးပွားလုပ်ငန်းများစွာ ဥပမာ...ပုလဲမွေးလုပ်ငန်းလို စီးပွားလုပ်ငန်းများစွာလည်း မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေပါတယ်။ လုပ်ပြီး အဆင်ပြေနေသူများကတော့ ငြိမ်နေကြပြီး၊ အခုမှ စတင်လုပ်မဲ့ လူငယ်များကတော့ သူတို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ IT, Agriculture, Factory, Import/Export, Education, Health စတဲ့လုပ်ငန်းများကို မြန်ဆန်စွာ လုပ်ကိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။